Fariimo muhiim ah ee Corona Virus, COVID 19 (Warbixin) | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Fariimo muhiim ah ee Corona Virus, COVID 19 (Warbixin)
Caabuqa koroona fayrays ee sababa cudurka COVD-19 wuxuu gaarii doonaa wadan kasta dhakhso, ama waqti aan dheeraynba. Waxaan shaki ka taaganayn in wadamo badani aanay heysan sheybaaro casriya iyo qalab tayeysan.
Xilliyadii u dambaysay, caabuqa looma helin wax talaala ama daawo ah oo u khaasa nasiib-daro. Marka loo fiiriyo is bedelkiisa hide, wuxuu ka sameysan yahay mid khatara. Xanuunkani wuxuu u muuqdaa mid ay sababeen hidasidayaal kala gedisan, oo u dhaxeeya Xamaarato iyo Shimbiro, wuxuuna ku dhacaa awooda uuna saameeyaa naasleyda, oo uu aadanuhana ka mid yihiin, islamarkaana waa muhiim inaad u leedahay aqoon weyn xanuunka: professor Chen Horin Dhaqtarka cusbataalka ciidanka qalabsida( milatary) ee Beijing ayaa sidaasi u sharaxay.
Haddaba waxaa laga helay Dalkeena 3 xaaladood oo midkood yahay Ajnabi, labada kale ay Soomaali yihin, sidaasina waxaa caddeysay wasaaradda Caafimaad ee Xukuumadda Soomaaliya.
Wasiirka Caafimaadka Soomaaliya Drs; Fowziya Abiikar Nuur oo la hadashay warbaahinta Qaranka ayaa xaqiijisay inuu jiro Kiiska Seddexaad ee Cudurka Covid-19, waxayna sheegtay in xanuunkan laga helay Qof Ajanabi ah oo ka tirsan shaqaalaha ka howl-gala xarunta Xalane ee Magaalada Muqdisho.
Sidoo kale qoraal lagu daabacay bogga Twitter-ka ee Qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in Xubin ka tirsan shaqaalaheeda Soomaaliya laga helay xanuunka Coronovirus, waxayna sheegtay in ay Wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ka taageerayso sidii loo xakameyn lahaa faafidda cudurka halista ah ee Corona.
Dhianaca kale Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in ay mideeyaan cududdooda iyo awooddooda, una istaagaan sidii ay dalkooda uga samata-bixin lahaayeen duruufaha caafimaad ee caabuqa Coronavirus ee uu ka faafay dalal badan oo caalamka ah ,isagoo tilmaamay in shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay si weyn uga murugoodeen dadka Soomaaliyeed ee qurbaha ugu geeriyooday cudurkan, wuxuuna Alle uga baryay caafimaad deg-deg ah dadka kale ee la il-daran waqtigaan cudurkaasi saf marka ah.
Caalamka waxaa si weyn wel-wel ugu haya Corona Virus oo sababa cudurka Covic 19, si aad ah ayuuna ku sii fidayaa, sidaasi awgeed waxaa lagamamaarmaan ah in la barto sida looga hortago maadama uusan laheyn daawo.
Tallaabooyinkani waxa ay lagama maarmaan u yihiin qof walba, si uu uga hortago Viruska Corona (Covid-19).
Qormadan waxa iska leh Hay’adda UNICEF, sidaasi awgeed Xogtan ehelkaaga iyo asaxaabtaadaba la wadaag si aad uga xoreysid welwel aan loo baahneyn.
1. Coronuhu waa Virus waaweyn waxaana lagu qiyaasaa in uu leegyahay (400-500 micro), sidaas darteedna nooc walba oo maryaha afka lagu xirto ah Cafuuf (Face mask) waa uu innagaga filan yahay inaan ka gaashaamano caabuqa.
2. Virus-kan Coronuhu ma dhex sabbaynayo hawada, laakiin waxa uu ku dhagayaa walxaha. Sidaas darteedna, isu gudubku kuma dhacayo hawada.
3. Marka Virusku gaaro oogada shay ka samaysan bir (metal) waxaa uu kusii dul noolaan karaa 12 Saacadood. Gacmahaaga oo aad si wacan u dhaqdo ayaana kaaga filan ka hortaggiisa.
4. Marka uu gaaro oogada dharkana, viruska Coronuhu waxa uu kusii dul noolaan karaa 9 saacadood, sidaas darteedna dharka oo aad mayrto ama cadceeda oo aad ku wartoo muddo labo saacadood ah ayaa ku filan si aad u dishid Virus ka.
5. Virusku marka uu soo gaaro gacantaadana, keliya waxa uu kusii dul noolaanayaa 10 daqiiqo. Sidaad awgeed ku faraxalo Jeermis dile ay Alcohol ku jirto si aad isaga nadiifisid.
6. Marka heerkulku gaaro 26-27 °C, Viruska Coronuhu waa uu dhimanaya, kuma noolaan karo goobaha kulul. Waxa kale oo talo ah cabitaanka biyaha kulul (diirran) iyo isku dhigidda cadceeda si xanuunka aad uga hortagtid. Iska ilaalinta cunnooyinka qaboow.
7. Ku luqluqashada biyo diirran oo milix leh waxa ay dili doontaa Viruska ku jira dhuunta, taasoo kaa badbaadin doonta in uu sambabkaaga gaaro Virusku.
Dhammaan Dadka Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inay yeelaan sida:-
1. Si joogto ah ugu farxalo Biyo iyo Saabuun ama isticmaal jeermis dile.
2.Hadaad yeelato Xummaad iyo Qufac hategin goobaha dadku ku badan yahay sida Jaamacadaha, Dugsiyada, Suuqyada iwm,Si deg deg ahna utag xarunta caafimaad ee kuugu dhaw ama wac 449
3.Marka aad Qufacayso ama Hindhisayso ku dabool Afka iyo Sanka maro yar ama Cududa adigoo xusulkaaga laabaya.
4.Si aad ah u kari Hilibka Xoolaha, kan Digaaga iyo Ukunta.
5.Hadaad qof salaamayso waxaa haboon in aad iska dayso salaanta gacan qaadka ah, raac Sunnada Nabiga (NNKH) oo dheh Assalaamu Calaykum.
W. D:- C/laahi Ruush
Previous articleMadaxweyne Farmaajo “Dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay u hoggaansamaan talooyinka caafimaad ee badqabkooda.”
Next articleMasuuliyiinta Caafimaadka oo yeeshay shir dib u eegis caafimaad